Amabhizinisi Aku-inthanethi Adinga Ukushift Marketing Ukuze Azile Phambili | Martech Zone
Amabhizinisi Aku-inthanethi Adinga Ukushift Marketing Ukuze Ahlale Phambili
NgoLwesihlanu, Novemba 8, 2013 ULarry Alton
Akungabazeki ukuthi i-Intanethi isishintshe kakhulu kule minyaka edlule, futhi lokho kuyiqiniso lokuthi izinkampani zilithengisa kanjani ibhizinisi labo online. Noma imuphi umnikazi webhizinisi udinga ukubheka kuphela inani lezinguquko i-Google elizenzile ku-algorithm yosesho lwayo ukuze ithole ukuqonda okuyisisekelo kokuthi amasu wokuthengisa we-Intanethi ashintshe kanjani ngokuhamba kwesikhathi.
Amafemu aqhuba ibhizinisi kwi-Intanethi adinga ukwenza izindlela zawo zokumaketha njalo lapho kunoshintsho kuma-algorithms osesho, noma angashiywa emuva aze afike lapho ukuthengisa kwabo kuhlupheka khona. Bob Holtzman we Mainebiz.com ikubeka ngokusobala:
“I-Intanethi iguquka ngokushesha okukhulu kangangokuthi lokho okusebenze onyakeni owedlule kungenzeka sekuvele kuphelelwe yisikhathi - futhi lokho kungachaza ukumaketha oku-inthanethi kule minyaka eyishumi edlule. Lapho nje ezinye izinkampani ekugcineni zakha amawebhusayithi azo okuqala, imithombo yezokuxhumana yaqala ukubamba izinhlamvu zamehlo nokwenza lezo zingosi ezisemuva kwejika zibukeke njengezindala noma ezingasizi ngalutho.
“Abalandele ukufika kuFacebook bazithola bephuzile emcimbini weTwitter, nabo. Ngesikhathi amanye amawebhusayithi eqala ukuhlanganisa imithombo yezokuxhumana, amadivayisi eselula abephoqa izinguquko ezinkulu ekwakhiweni kwamasayithi, ekwakhiweni kwezakhiwo, nasekuqukethwe. ”
Njengamanje, amabhizinisi aku-inthanethi asabela kuzinguquko ezenzeke njengomphumela wesibuyekezo sakamuva seGoogle, esibizwa ngeHummingbird. Inhloso yalolu shintsho lwe-algorithm bekungukususa esinye isisindo sisuke ekusesheni kwegama elingukhiye siye kusesho lokuxoxa olufuna izimpendulo zemibuzo eqondile.
I-Google isho ukuthi ifuna ukukhuthaza okuqukethwe (amawebhusayithi) akwazi ukuphendula imibuzo yabasebenzisi, ngakho-ke okuqukethwe kwakho akukwazi nje ukukhuthaza ulayini womkhiqizo noma umkhiqizo. Kufanele kube yinto ekhonjiswa njengeyigugu kuqala. Lapho nje lesi sisekelo sesakhiwe, izindlela zokumaketha zingasetshenziswa ukuhlanganisa isiza sakho ngaphandle kokudlulela kakhulu.
Thatha leli khasi kusuka ku- AmaCleveland Shutters Ngokwesibonelo. Isihloko sekhasi sifundeka kanje: Got bay windows? Udinga isixazululo esisebenzayo? Ngakwesokudla nje, inkampani ikhombisa ukuthi ikhuluma ngendaba ababukeli abangaba nayo.
Manje okwenza leli khasi lihluke ukuthi inkampani ayifunanga udonga olukhulu lombhalo ukuchaza lokho umuntu angakwenza ngewindi le-bay; ikhombise isivakashi uchungechunge lwezithombe ezigqamisa izixazululo zenkinga. Umuntu ongahle afune impendulo hhayi kuphela angayithola, kepha angabona ukuthi imikhiqizo kaCleveland Shutters iyisixazululo kanjani ngaphandle kokushaywa ukukhangisa kwendabuko.
Ithonya elikhulayo leselula
Ochwepheshe bathi futhi inani elikhulayo leselula ngokuqinisekile lizoba nomthelela omkhulu ekumaketheni ngokuzayo. "Indawo lapho kutholakala khona ukusesha okuningi kumadivayisi eselula kunamakhompyutha amile iza ngokushesha kunokuba abaningi becabanga," kusho uMsunguli Wosesho wakwaGoogle uMatt Cutts. "Ngeke ngimangale uma maduzane sithatha isivinini sekhasi leselula sicabangele i-SEO."
Njengomphumela, izabelomali eziqondiswe koku izinhlelo zokumaketha ezingamaselula sekwenyuke ngamaphesenti ayi-142 phakathi konyaka wezi-2011 nowezi-2013. Okuningi kwalokhu kuqala ngohlobo olusebenziseka kalula lwesiza senkampani, esivame ukunganakwa ngamabhizinisi aku-inthanethi.
“Abasebenzisa iWebhu Web Mobile bangamaqembu afunekayo. Uma bevakashela iwebhusayithi yakho futhi ingalungiselelwe kokubili izinto abazisebenzisayo nezindlela ezehlukene abaziphatha ngazo abasebenzisi beselula, bazokhungatheka futhi bahambe, ”kusho uKen Barber, iphini likamongameli wezokukhangisa ku-mShopper.com.
Ngenkathi ukuthambekela kuzoshintsha ngokuqinisekile, into eyodwa i-Google engakaze iphambuke kuyo ukubaluleka kokuhlangenwe nakho kwekhwalithi yekhwalithi njengento ebaluleke kakhulu ekulinganisweni kwamakhasi emiphumela yosesho. Ukunikezela ngokuqukethwe okubalulekile nokunikeza izivakashi, zombili nge-desktop nangeselula, ngokuhlangenwe nakho okunothile, okubandakanyayo womabili amasu angasoze aphela ngesitayela.
Umlando wama #Hashtags